Ny olan'ny mpampiasa sasany an'ny Apple Card Family miaraka amin'ny Daily Cash | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny volana lasa teo, Apple dia nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny sehatra vaovao Apple Card Family. Io dia ahafahan'ny mpampiasa Apple Card manampy mpiara-miasa sy mpampiasa manana alalana miaraka amin'ny sehatra Family Sharing an'ny Apple, ao anatin'izany ny fanohanana ny Valim-bola isan'andro. Na izany aza, toa maro ireo mpampiasa no tsy afaka niditra tamin'ny valisoa voatonona ankoatry ny olana hafa.
Mpampiasa maro no nanantona izany kofehy reddit mitatitra ny tsy fahafahanao mahazo valisoa Daily Cash amin'ny Apple Card Family. Toa ireo mpiara-miasa vaovao amin'ny Apple Card Aza mahazo valisoa isan'andro amin'ny fividianany. Ny loka dia tokony hapetraka ao amin'ny fifandanjan'ny Apple Cash an'ny mpampiasa karatra isan'andro aorian'ny fahavitan'ny fifampiraharahana.
Ho fanampin'izany, ireo mpampiasa voakasik'izany dia toa tsy afaka mandoa ny fifandanjan'ny Apple Card amin'ny fampiasana ny fifandanjana Apple Cash. Fa kosa, mila mampiasa kaonty amin'ny banky izy ireo. Ny olana hafa voamarika sy notononin'ireo mpampiasa dia misy ny mpiara-miasa sy ireo mpampiasa alalana tsy mahazo fampandrenesana momba ny fividianana sy ny tsy fitoviana manodidina ny fetran'ny trosa.
Mpampiasa voakasik'izany nifandray imbetsaka tamin'i Apple sy Goldman Sachs momba io olana io, fa tsy misy vahaolana, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy dia nilaza fotsiny ireo orinasa fa fantany ny olana ary miasa ny ekipa injeniera hanamboatra izany.
Efa misy ireo manolotra vahaolana hafa:
Mila miditra ianao ity pejy web ity ary avy eo, aorian'ny fidirana an-tsokosoko dia mila mankany amin'ny Settings ianao. Ho hitanao fa ny Daily Cash se nangonina tao ary azonao ampiharina amin'ny fifandanjan'ny Apple Card ianao. Amin'izao fotoana izao, ny vahaolana tsara indrindra ankoatr'izany dia ny miantso ny fanohanana ara-teknika an'ny Apple, mangataka ny firaketana ny olana ary alefa any amin'ny departemantan'ny injeniera. Aorian'izany, miantso an'i Goldman Sachs ary angataho izy ireo hanokatra tranga ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny olan'ny mpampiasa Apple Card Family amin'ny Cash isan'andro